Anya ụmụ nwoke
Ebe ọ bụ na n'oge ochie, agụmakwụkwọ nke ụmụ agbọghọ na ụmụ nwoke dị nnọọ iche: ihe e nyere ụmụ nwoke, maka nwa agbọghọ ahụ - nke a bụ ihe ngosi na-adịghị anakwere nke uto ọjọọ na vice versa. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu ahụ bụ na mbụ anyị nọ na-etinye ma ọdịiche dị iche iche na nghọtahie ụwa.
Ka ọ dị ugbu a, usoro agụmakwụkwọ nke oge a ejichapụworị site na nwata ịmara na enwere nwanyị na nwoke ma na nke a nwere ọdịiche ya.
N'oge na-adịbeghị anya, ụfọdụ ndị inyom kwụsịrị ịṅa ntị na nwanyị ha. Ihe kpatara nke a nwere ike ịbụ dị ka ọdịiche na agụmakwụkwọ nke onye ahụ mgbe ọ bụ nwatakịrị nwanyị ma ọ bụ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ na-emetụta nhazi echiche ziri ezi banyere ihe ike nke femininity bụ.
Nke mbụ, ọ bụ nwanyị nke na-eme ka obi mmadụ tie aka ngwa ngwa. Ihe nzuzo ahụ adịghịkwa mma mma, ogologo, na-egbuke egbuke na anyanwụ, ntutu ma ọ bụ ihu ejiji nke ọma, kamakwa n'ime mma ime, àgwà.
Ụwa dị n'ime ụwa
Ịhụ ụmụ mmadụ n'anya bụ àgwà ha. Mmetụta uche, ịdị nro, ịdị umeala n'obi na ụdị ọchị - ndị a bụ àgwà ndị, n'echiche nke ụmụ mmadụ, bụ ihe nnọchianya nke nwanyị. Ọ ga-eme ka mmadụ ọ hụrụ n'anya nwee ike ịṅụrị ọṅụ kwa ụbọchị.
Egwuregwu bụkwa akụkụ dị mkpa nke agwa ahụ na-akọwa echiche nke femininity. Egwuregwu na-eme ka nwanyị bụrụ ihe na-achọsi ike ma mara mma. Ọ gaghị abụ ihe na-enweghị oke igosipụta àgwà a na uche na mgbe ọ bụla o kwere omume.
Azụlite na nkwupụta nke femininity bụ site na mmekọrịta nke nwanyị, ma ya onwe ya ma ụwa nke gbara ya gburugburu. Ibu mmadu site n'ile mmadu anya bu na nwanyi kwesiri ihu n'anya nani ya, kamakwa ndi gbara ya gburugburu. Mmetụta na ihe omimi mere ka nwanyi bụrụ ezigbo eze nwanyị n'anya ụmụ nwoke.
Obi abụọ adịghị ya na enwere ọtụtụ nchịkọta ọzọ, site na echiche nke ụmụ nwoke, kọwaa echiche nke femininity. Ma, n'ezie, maka nwoke ọ bụla dị mkpa ọ bụ nkwanye ùgwù maka nwanyị ahụ. Onye ọ bụla n'ime ndị nwoke na-enwe mmekọahụ siri ike na-enwe ekele maka ikike nwanyị nwere ịghọta nwoke ma nwee ekele maka omume ya.
Ụmụ nwoke gbasara ịlụ nwanyị - mma elu
Akụkụ dị mkpa nke ezi ngosipụta nke nwanyị bụ ịma mma. Nwanyị ọ bụla kwesịrị ịcha mma ma mara mma. Dịka ọmụmaatụ, ụmụ nwoke dị ka ya mgbe ogologo ntutu dara n'elu ubu nwayi nwayọ. Tụkwasị na nke a, ha hụrụ n'anya mgbe ndị inyom na-ekpuchi isi ha, na-emetụ ha aka. Ọtụtụ n'ime ha niile na-achọ ọdịdị anụ ahụ na agba aja.
Na-egosipụtakarị femininity na ísìsì ísì ụtọ nke ísì ísì, nke nke ọ bụla na-ekere òkè ọrụ nke kaadị azụmahịa nke nwanyị ọ bụla. Echefula banyere ịdị mma nke mmegharị ahụ, ụdị mkparịta ụka. Udo nke olu na amara nke ije - nke ahu bu ihe ga-aburu otu n'ime ihe nke nwanyi site na anya mmadu.
Cheta ihe sitere na obi, mara mma, n'enweghi ngosipụta nke ihe ojoo, chia. Mee ka ọchị gị yiri mkpuchi mmiri.
Mụta iji ọsọ na ìhè.
O doro anya na ịhụ ụmụ mmadụ n'anya bụ ihe a na-akọwa ọtụtụ ugboro. Ma nwanyị ọ bụla nwere ike ịghọ ezigbo ihe maka nwoke ọ hụrụ n'anya, n'agbanyeghị na enweghi ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a dị na ya. Iji mee nke a, ọ dị mkpa ka ị gbanwee àgwà gị onwe gị, na-echetara onwe gị na ọ bụ nwanyị nwere ike igosi nhụsịrị ike nke ọdịdị nwa ya. Ya mere, inye ya nwoke obi na ọ bụ naanị ya bụ onye na-echebe ya nakwa site n'àgwà ya n'ebe ọ nọ kwadoro, ma ọ ga-enwe nwanyị obi ụtọ ma ọ bụ.
Pheromones nọ n'ụlọ
Nsogbu nke a na-eto eto na ezinụlọ
Gini mere nwoke ji ele nwanyi anya ya anya?
Kedu ka ị ga - esi kpọọ onye na - ahụ n'anya?
Chemistry nke Ịhụnanya
Kedu ka ị ga-esi ghọta ma ọ bụrụ na ha esoro gị?
Kedu ka esi eme ka mmekọrịta gị na onye ọ bụla?
Ụlọ oche oche
Mmiri foto nnọkọ
Kedu otu esi kpuchie elu ụlọ?
Cheesecake na udara
Ntughari ime ime
Nkịtị maka brik
Enwere m ike ị na-aṅụ ara m mkpụrụ mịrị amị?
Ndị isi na-ese foto
Chiiz casserole na poteto
Turkish ìgwè nke nwamba
Apricot jam ke multivarque - kacha mma ntụziaka maka delicious na ngwa ngwa nkwadebe
Olee otú iji dozie ndị mmadụ?
Megera na akụkọ ifo na ezigbo ndụ
Ugbo nke carrots
Na-egbuke egbuke na agba ọchịchịrị 2016
Tea na cinnamon maka ụkọ ọnwụ
Ịchọta ime ụmụ nwoke